DAAWO SAWIRRO: Kulamadii ugu dambeeyey ee ka socda Nairobi, Xildhibaano, Wasiir hore iyo xubno kale oo shirsan. – Puntlandtimes
NAIROBI(P_TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Nairobi ayaa sheegaya in kulamadii ugu xasaasisanaa ay ka socdaan Hotelka Pan Afrika, oo ay leeyihiin xildhibaano, wasiiro hore, Gudoomiyaasha Xisbiyada dalka qaarkood, waxayna ka wada hadlayaan xaaladdaha Siyaasadeed ee dalka.
Kulankan waxaa qabanqabaadisa la sheegay in uu leeyahay Prof Maxamed Cabdi Gaandi oo ah mudane katirsan baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya.
Kulanka waxaa ka qeybgalaya siyaasiin badan oo mucaaradku ah dawladda Soomaaliya, waxaa kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdi Farax Juxa oo horey wasiir uga soo noqday Xukuumadda hadda, Xildhibaan Cabdulqaadir Cali Cosoble iyo xubno kale.
Warar hoose ayaa sheegaya in dhamaadka kulankan uu soo bixi doono warsaxaafadeed ay dhinacyadan uga hadli doonaa xaaladdaha siyaasadeed ee dalka, xili ay Nairobi joogaan madaxda dawlad gobaleedyada qaarkood.